mercredi, 15 avril 2020 13:50
Malagasy Rugby: Nanolotra fanampiana ho an’ireo mpilalaon’ny Makis de Madagascar enti-miatrika ny fihibohana
Nanolo-tanana ireo mpilalaon’ny Makis de Madagascar lahy sy vavy (U20, XV, VII) ny eo anivon’ny Malagasy Rugby, ka nanolotra fanampiana ara-bola entin’izy ireo miatrika ny fihibohana ho fisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19. Notanterahina androany teny amin’ny Kianja Makis Andohatapenaka ny fizarana izany, notarihin’ny filohan’ny Malagasy Rugby, Rakotomanana Marcel. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 12 avril 2020 19:29
Kitra - Real Sociedad: Nahena hatramin’ny 20% ny karaman’ireo mpilalaony
Nifanaraka ny mpitantana ny Real Sociedad, klioba diviziona voalohany amin’ny baolina kitra any Espaina sy ireo mpilalao matihanina ao aminy, omaly sabotsy 11 aprily, fa hahena hatrany amin’ny 20% ny karaman’ny mpilalao. Ny fiatoan’ny fifaninanana any Espaina manoloana ny fisian’ny valanaretina Coronavirus no antony. Namono olona 16 606 tany Espaina ny Coronavirus tamin’ireo marary niisa 163 027 voamarina fa mitondra ny tsimokaretina, araka ny tatitra vonjimaika hatreto.
dimanche, 05 avril 2020 10:28
Covid-19 - Angletera: Miantso ireo mpilalao kitra matihanina hampidina hatramin’ny 30 % ny karamany avy
Nanao antso amin’ireo mpilalao matihanina ao aminy ireo klioba miisa 20 amin’ny « premier league » amin’ny baolina kitra anglisy mba hampidina hatramin’ny 30 % ny karamany avy, ho fandraisana anjara amin’ny ady tsy hianahan’ny valanaretina Coronavirus, izay efa namoizana ain’olona 4 313 any Angletera hatramin’izao.
mardi, 31 mars 2020 08:21
Lalao Olympika – Tokyo: Nahemotra ho amin’ny 23 jolay ka hatramin’ny 8 aogositra 2021
Nahemotra herintaona ary dia namaritra daty vaovao ny komity mpikarakara hanatanterahana ny Lalao Olympika any Tokyo-Japon. Hatao amin’ny 23 jolay 2021 ny lanonam-panokafana, ary ny 8 aogositra 2021 kosa no hatao ny lanonam-pamaranana. Ny 24 jolay ka hatramin’ny 9 aogositra 2020 no daty efa raikitra tokony hanatanterahana io Lalao Olympika io saingy noho ny fisian’ny valanaretina coronavirus izay mahenika an’izao tontolo izao, dia izao nahemotra izao.
samedi, 21 mars 2020 12:35
Baskety - FMBB: Miato avokoa ny hetsika sy fifaninana rehetra manerana ny Nosy
Nanao fanambarana ny federasiona malagasy ny baskety fa miato avokoa manomboka anio 21 marsa 2020 ny hetsika sy fifaninanana rehetra manerana ny Nosy ho fisorohana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus.
Namoaka fanapahan-kevitra ny Federasiona Malagasy ny Baolina kitra androany, manoloana ny fihanak’ity valanaretina coronavirus ity, fa mihantona ny fifaninanana baolina kitra rehetra manerana ny Nosy, manomboka ny 23 marsa 2020. Ny Filoham-pirenena moa tamin'ny fanambarana nataony androany 20 marsa, dia nanambara fa mihato avokoa ny fifaninana ara-panatanjahantena rehetra manomboka androany.
Navotan’ny coronavirus sy ny fanapahan-kevitry Kaofederasiona afrikana ny baolina kitra na CAF ny hampihatona ireo lalao fifanintsanana ny CAN, noho ny fihanak’io valanaretina io aty Afrika, ny fitsarana ny fahafahan’ny « Stadium Mangarano » mandray lalao iraisam-pirenena, satria tsy tontosa ara-potoana ny fanarenana ireo lesoka sy fanarahana ny fepetra nomen'ny iraky ny CAF nitsirika ity foto-drafitrasa ity, afa-tsy ny fanesorana ireo mpivaro-kazo. (Sary Tohiny)
mardi, 17 mars 2020 20:49
Kitra-CHAN 2020: Nahemotra amin’ny fotoana tsy mbola voafaritra ny dingan’ny famaranana
Cameroun no hampiantrano ny dingana famaranana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra amin’ireo ekipam-pirenena rafetin’ireo mpilalao tsy mila ravinahitra any ivelany. Efa voafaritry ny CAF fa tokony hatao ny 4 ka hatramin’ny 25 aprily 2020 saingy manoloana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus dia ahemotra ho amin’ny fotoana manaraka, tsy mbola voafaritra io fifaninanana kaontinantaly io, araka ny fanambarana navoakan’ny komity mpikarakara ny CHAN, taorian’ny fivoriana tsy ara-potoana natao androany talata 17 marsa 2020. Tsy tafita hiatrika ity dingan’ny famaranana ny CHAN 2020 ity ny Barea CHAN. Noravan’i Namibia ny nofinofin’ny Malagasy, rehefa niondrika tamin’ny isa 2 noho 0 tamin’ny lalao miverina tany Namibia na dia nandresy tamin’ny isa 1 noho 0 aza ny Barea CHAN tamin’ny lalao mandroso, lalao izay namaritra ny fahazoana tapakila ho any Cameroun. Firenena afrikanina isany ahitana trangana coronavirus i Cameroun. Miisa folo hatramin’ity androany ity ny marary voamarina fa voan’io valanaretina io, araka ny nambaran’i Dr Manaouda Malachie, minisitry ny fahasalamana any Cameroun.
lundi, 16 mars 2020 11:30
Sary: Fédération Sport Boules Malagasy
Tsipy kanetibe: Fantatra ireo nibata ny Amboaran’i Madagasikara amin’ny sokajy telo
Tontosa teny amin’ny kianja « Assurance Mama » Imerintsiatosika, nandritra ny sabotsy sy omaly alahady, ny fifaninanana amin’ny fiadiana ny Amboaran’i Madagasikara amin’ny tsipy kanetibe. Nahatratra 163 ireo klioba nandray anjara avy amin’ny lafivalon’ny Nosy. Sokajy telo no nifaninanana, ka nandrombaka ny Amboara teo amin’ny sokajy « Vétéran » olon-droa miaraka, lehilahy, i Randriamparany Yves sy Ramanantsoa, ekipa faha-5 avy amin’ny C2BA. Teo amin’ny sokajy vehivavy, lalaon’olon-telo, lasan’ny ekipa rafetin’i Nirinaniaina Sylvia Monique sy Randriambahiny Francine ary Andriamihaja Volatiana avy amin’ny C2BA. Ho an’ny sokajy lehilahy, lalaon’olon-telo miaraka indray kosa, dia lasan’ny ekipa rafetin’i Razafimahery Mbolatiana sy Andrianantenaina Roger ary Andrianainarivelo Etienne, avy amin’ny BIC. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 15 mars 2020 11:10
Tsipy kanetibe: Fiadiana ny amboaran’i Madagasikara
Tanterahina eny amin’ny Boulodrome MAMA Imerintsiatosika – Arivonimamo omaly sy anio alahady 15 marsa 2020 ny fifaninanana iadiana ny Amboaran’i Madagasikara. Sokajy telo no ifaninanana, dia ny olontelo miaraka lahy sy vavy, ary sokajy olondroa « vétéran ».